Caafimaadka Degmada Siouxland waxay soo wariyeen hal kiis oo cusub oo ku saabsan coronavirus-ka | KWIT
Marka loo eego websaydhka 'coronavirus' ee gobolka, ku dhawaad kalabar dadka tijaabiyey cudurka ayaa u dhexeeya da'da 18 iyo 40. Waxaa jira 756 dhimasho ah oo 401 ay ku xirnaayeen xarumaha daryeelka muddada-dheer.
Ku dhawaad kalabar xaaladaha wanaagsan waa inta u dhaxaysa da'da 18 iyo 40.
Hantidhawrka gobolka wuxuu leeyahay natiijooyinka imtixaanka COVID-19 ee barnaamijka Iowa toos looma wadaagayo Waaxda Caafimaadka Dadweynaha Iowa.
Waxaa taa bedelkeeda xogta laga helayo State Hygienic Lab ay marka hore aadeysaa laba shirkadood oo gaar loo leeyahay oo qandaraas la galay gobolka si loo abuuro barnaamijka.
Sharciga gobolku wuxuu u baahan yahay in si deg deg ah loogu wargaliyo Waaxda Caafimaadka Dadweynaha iyo in qaadashada dariiqa aan tooska aheyn ay ka dhigeyso xogta mid u nugul jabsiga iyo khayaanada.
Wasaaraddu maysan sheegin sababta natiijooyinka Imtixaanka Iowa looga soo warbixinayo si ka duwan macluumaadka kale ee imtixaanka. Qoraal ahaan, waaxdu waxay leedahay xafiiska qareenka guud ee Iowa wuxuu go'aamiyay in nidaamku waafaqsan yahay sharciga gobolka.
Daraasad ay sameysay Jaamacadda Iowa State University ayaa muujineysa in masiibada safka ah ay saameyn ku yeelatay shaqo la’aanta sidii ay markii hore ka fikirneyd.
Waxay muujisay kumanaan dad ah lama tirin in kasta oo aysan shaqeynin.
Sidoo kale, dhalinyarada waaweyn ee da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 24 ayaa si daran ugu soo gaadhay khasaare shaqo.
Kooxo kale ayaa sidoo kale saameyn ku yeeshay, oo ay ku jiraan shaqaale dakhligoodu hooseeyo, oo ay ku jiraan shaqaalaha Hispanic iyo Black.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa sheegay inaysan arkin wax ku soo kordha faafitaanka bulshada ee fayraska kadib markii kumanaan kun ay isugu soo baxeen xuska Maalinta Xorriyadda ee galbeedka gobolka.
Go'aanka Kristi Noem wuxuu dhiiri geliyay isu imaatinnada dadweynaha usbuucyadii la soo dhaafay.
Waxay ku qabatay dabaaldegyo bannaanka dibaddeeda iyada oo aan ku mashquulin bulshada Mount Rushmore bishii Luulyo 3.
Warbixinta South Dakota ee 25 kiis oo cusub waxay ahayd tii ugu hooseysay tan iyo bishii Abriil. Waxaa jiray 7,524 xaaladood oo togan iyo 109 dhimasho ah. Gobolka midowga wuxuu leeyahay 156 xaaladood oo togan iyo hal dhimasho.
Gobolka Nebraska wuxuu ku soo waramayaa 288 dhimasho iyo ku dhawaad 21,400 xaaladood oo wanaagsan oo sedex kale ah gudaha Dakota County 1,822 iyo 39 dhimasho.